ကွဲပြားခြားနားသောရောင်းချသူများထံမှ OPERATING အပူချိန်ကတ်များ - ဗီဒီယိုကဒ် - 2019
ခေတ်သစ်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များမြေတပြင်လုံးသည်၎င်း၏ပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူကွန်ပျူတာများ, မှတ်ဉာဏ်, ပါဝါထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းများနှင့်အအေးစနစ်များဖြစ်ကြသည်။ ဒါကအအေးအဆိုပါ GPU ကိုများနှင့်အခြားအစိတ်အပိုင်းများကတော့ PCB လွှတ်ပေးရေးအပေါ်အပူတွေအများကြီးတည်ရှိသကဲ့သို့, အရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်နှင့်အပူလွန်ကဲသဖြင့်ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အဆိုပါ GPU ကိုအပူချိန်ကိုတိုက်ရိုက်င်း၏ပါဝါကိုသာသက်ရောက်: မြင့်နာရီအကြိမ်ရေ, ပိုနံပါတ်များကို။ ဒါ့အပြင်အမျိုးမျိုးသောအအေးစနစ်များကွဲပြားခြားနားသောအပူလွန်ကျူးရှိသည်။ အဆိုပါရည်ညွှန်းမော်ဒယ်အစဉ်အလာမဟုတ်သောရည်ညွှန်း (ထုံးစံအားဖြင့်) coolers နှင့်အတူဂရပ်ဖစ်ကတ်များထက်ပိုမိုအားကောင်းအပူသည်။
ဝန်အောက်မှာ 100% - ဂရပ်ဖစ်ကဒ်၏ပုံမှန်လုပ်ငန်းလည်ပတ်အပူချိန် 55 ဒီဂရီနှင့်ရိုးရှင်းသော 85 ထက်မပိုသင့်ပါတယ်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အထက်န့်သတ်ချက်အထူးသဖြင့်က AMD ၏ထိပ်တန်းအစိတ်အပိုင်း, ဥပမာ, R9 290X ထံမှအစွမ်းထက်ဂရပ်ဖစ်ကတ်များဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကို, ကျော်လွန်သွားနိုင်ပါသည်။ 95 ဒီဂရီ - ဤအဆင့်မြင့်ထိပ်တန်းကျနော်တို့ 90 ရဲ့တန်ဖိုးကိုမြင်နိုင်ပါသည်။
10 အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအများဆုံးကိစ္စများတွင် Nvidia ကအပူကနေမော်ဒယ်အဘို့ - 15 ဒီဂရီ, သို့သော်ဤသာ GPU ကို (10 စီးရီး) နှင့်ယခင်နှစ်ခု (700 နှင့် 900 စီးရီး) ၏လက်ရှိမျိုးဆက်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါအဟောင်းတွေလိုင်းအတော်လေးဆောင်းရာသီတွင်အခန်းအပူနိုင်ပါတယ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
အားလုံးထုတ်လုပ်သူအများဆုံးအပူချိန်၏ဂရပ်ဖစ်ကတ်များယနေ့ 105 ဒီဂရီဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါကိန်းဂဏန်းများအထက်ပါတန်ဖိုးများထက်ပိုမိုမြင့်မားရောက်နေတယ်ဆိုရင်, ထို့နောက် Monitor ပေါ်မှာဂိမ်းများ, Twitch နှင့်အပိုငျးအတွင် "trolls" ပုံရိပ်တွေအဖြစ်မျှော်လင့်မထားတဲ့ကွန်ပျူတာပြန်ဖွင့်စသော adapter, ၏အရည်အသွေး degrades သောအပူလွန်ကဲရှိသေး၏။
- pyrometer အစီအစဉ်များများ၏အကူအညီဖြင့်သို့မဟုတ်အထူးကိရိယာများကို အသုံးပြု. : GPU ကိုအပူချိန်တိုင်းတာခြင်းနည်းလမ်းနှစ်ခုရှိပါတယ်။
ဂရပ်ဖစ်ပရိုဆက်ဆာနှင့်တစ်ဦးတည်းသောအအေးစနစ်ကရေတိုင်ကီအကြားအပူ interface ကိုအပူစီးကူး (အပူအမဲဆီ) လျှော့ချ။ ဤပြဿနာကိုမှဒီဖြေရှင်းချက်အပူငါးပိကိုအစားထိုးရန်ဖြစ်ပါသည်။
ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ပေါ်တက်ရင်ပန်ကာအေး။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ယာယီဖြစ်စေသောစပါးအတွက်အမဲဆီအစားထိုးသင်လုပ်နိုင်သည်, ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ ဒီ option ကိုရလဒ်များကိုမဆောင်ခဲ့လျှင်, သင်ပန်ကာကိုအစားထိုးရန်ရှိသည်။
မြေမှုန့်ကိုသိသိသာသာ GPU ကိုထံမှလွှဲပြောင်းအပူငျ့သှားရန်၎င်း၏စွမ်းရည်ကိုလျော့ကျစေပါတယ်ရာ, ထို heatsink ယပ်အပေါ်အခြေချခဲ့သည်။
မကောင်းတဲ့ produvaemost ကွန်ပျူတာ။
စုစည်းတင်ပြရန်, ငါတို့အောက်ပါပြောနိုင်: "Operating အပူချိန်ကဗီဒီယိုကဒ်" - အယူအဆဟာအလွန်သမားရိုးကျဖြစ်ပါသည်, ထိုအပူဖြစ်ပေါ်ရသောအထက်သာအချို့သောကန့်သတ်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ GPU ကို၏အပူချိန် device ကိုစတိုးဆိုင်အသစ်ဝယ်ခဲ့ပါတယ်အဖြစ်မှန်မှန်ပရိသတ်တွေလည်ပတ်ပုံကိုစစ်ဆေးလျက်, အအေးစနစ်ဖုန်မှုန့်စုဆောင်းခြင်းလျှင်ပင်, အစဉ်မပြတ်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပေသည်။
ဗီဒီယို Watch: Introduction to Operating System and its Functions. Operating System (အောက်တိုဘာလ 2019).